Kazhinji kutaura, zuva riri pamhenderekedzo rinofanirwa kuve zuva rekuzorora uye mufaro muzuva, kwete zuva rekumanikidzwa nekuti amburera inoramba ichibhururuka ichienda kure. Neraki, iwo akanakisa emahombekara ezvikepe ari nyore kuisa uye akaedzwa nevatengi kakawanda kuti agare munzvimbo kunyange kana mhepo iri kuvhuvhuta.
Pane maviri makuru emhando dzekufunga nezvekutenga kweanogamuchira.
Sezvinoreva zita rayo, chikanda-chinamira chakabiwa mujecha kuti chigadzikane. Iyi chimiro chinoda kuti imwe mhasuru iuye kune zvishoma, uye iyo screw-in amburela anchor inonyanya kushandiswa mune semi-nyoro uye yakasimba jecha. Kana jecha rako rakasununguka uye rakaoma, iwe haungawani zvaunoda, asi iyi chimiro chakasimba uye chakanyanya nyore kubvisa pakupera kwezuva.
Ihuremu hwehuremu hunorema hunobata amburera yako munzvimbo nekuzadza muhomwe nejecha. Rudzi rwechigaro ichi chinoshoreka zvakanyanya uye chinoda musimba mashoma emusumbu pane iyo mhando-mune rudzi (kunyange vana vanogona kubatsira). Iwe unogona zvakare kutakura chikafu chekudya kana kuverenga zvinyorwa muhomwe yako kuti uwedzere uremu. Nekudaro, pakupera kwezuva, izvi zvinoda basa rakawanda kuti arichenese uye akaripeta.
Tsvaga amazon yeakanakisa beach anchor, zvisinei kuti ndeipi yaunofarira. Kunyangwe iwe uchazoda kutenga maviri ekutanga zvakasiyana, ini ndinosanganisirawo amburera ine yakavakirwa-inchor.Tinongokurudzira zvigadzirwa zvatinoda, uye isu tinofunga kuti uchaitawo. Tinogona kuwana chikamu chemari yekutengesa kubva pane zvigadzirwa zvatinotenga kubva kuchinyorwa ichi, icho chakanyorwa neboka redu revashandi.
Nguva yekutumira: Chivabvu-20-2020